Innos D6000 famerenana, terminal lehibe misy batterie 6000 mAh | Androidsis
Androany izahay no mitondra anao ny Innos D6000 famerenana, terminal eo anelanelany fa misy endri-javatra mahaliana kokoa noho izay ho hitantsika etsy ambany. Ny mpanamboatra dia Innos, marika tsy dia fantatra loatra any Espana ary izany, toa ny ankamaroan'ny mpanamboatra terminal Android vaovao, dia avy any Shina. Ny terminal dia natolotry ny fivarotana an-tserasera Geekvida ary Azonao atao ny mividy azy amin'ny € 209,99 eto.
Araka ny hitanao amin'ny sary ao amin'ilay lahatsoratra, dia finday avo lenta finday miaraka aminy endrika mahonon-tena ary matevina kokoa sy mavesatra kokoa noho ireo fitaovana mahazatra antsika. Saingy misy antony izany, ary izany no izy ny endri-javatra lehibe izay miavaka ao amin'ny D6000 dia ny bateriny (amin'ny endriny milaza maro) izay manery ny habeny sy ny lanjan'izy ireo ho ambony noho ny antonony. Ny Innos D6000 dia omena bateria, 2480 mAh anatiny ary 3520 mAh azo esorina.
1 Batterie roa misy 6000 mAh total
2 Famolavolana ny Innos D6000
3 Ny toetra ara-teknikan'ny Innos D6000
5 Isa manohana
6 Hevitra manohitra
8 Sarin'ny sary
Batterie roa misy 6000 mAh total
Misaotra ireo bateria roa, ny Innos D6000 afaka maharitra 4 andro amin'ny fampiasana mafy ny terminal, zavatra tsy mahazatra mihitsy eny an-tsena ary mbola tsy hitantsika teo aloha. Mba hahafahana mameno ny batery roa amin'ny fotoana iray dia manana ny haitao ny Innos DuoCharge izay tsy isalasalana fa manamora ny fanatanterahana betsaka io asa io amin'ny alàlan'ny fahafaha-mamoaka azy amin'ny fomba mitovy amin'ny fitaovana mahazatra.
Fampitahana matevina amin'ny iPhone 6s
Araka ny hitanao amin'ny sary etsy ambony, ny bateria faharoa dia manery ny hampitombo ny hatevin'ny fitaovana, fa io ihany no safidy azo atao raha te hanana izany hery lehibe an'ny fizakantena izany isika. Amin'ny haavon'ny lanjany dia tsikaritra ihany koa izy io, izay manakaiky ny 200 grama.
Famolavolana ny Innos D6000
Ny famolavolana terminal dia mahitsy miaraka a vita plastika somary matanjaka. Amin'ny lafiny ankavanana dia manana bokotra roa izy; ny iray ho an'ny off sy ny ary ny iray ho an'ny fakantsary, raha ny bokotra volume kosa dia eo ankavia.
Eo amin'ny farany ambany dia misy grilles roa ho an'ny mpandahateny sy ny Fampidirana USB Type-C.
Ny toetra ara-teknikan'ny Innos D6000
Amin'ny sehatra teknika, ny tombotsoan'ny smartphone dia mihoatra ny mahaliana.
efijery 5.2 santimetatra miaraka amin'ny JDI LTPS sy ny vahaolana Full HD an'ny 1920 x 1080 teboka (423 ppi)
processeur 53 GHz 4-core ARM Cortex-A1.5 miampy 53 GHz 4-core ARM Cortex-A1
Fakan-tsary aoriana 16 megapixels OV16825 miaraka amina f / 2.2 ary flash LED roa
Fakan-tsary aloha 5 megapixels misy f / 2.0 aperture
Conectividad "4G LTE SIM roa GPS misy A-GPS sy GLONASS Wi-Fi 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi Direct Bluetooth 4.0 USB Type C USB OTG Jack 3.5mm Radio FM "
Fitaovana hafa «Plastika namboarina USB karazana C. »
bateria 2480 mAh sy 3520 mAh
lafiny 12mm matevina
lanja 196 grama
vidiny "folo € 99 »
Batterie tsy mahazatra
Ny hatevin'ny fitaovana sy ny lanjany
The Innos D6000 dia terminal eo anelanelany misy fiasa miavaka ary amin'ny vidiny mirary. Ho an'ny 200 € mahery monja dia manana terminal misy herinaratra ambony kokoa isika. Ny bateria indroa sy karazana USB C dia roa amin'ny tanjany.
Ary farany, eto ianao dia afaka mahita galerie miaraka amin'ireo sary sisa tavela amin'ny Innos D6000.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fanadihadiana Innos D6000, terminal lehibe misy batterie 6000 mAh
Jorge Marin Nieto dia hoy izy:
Tsy mamporisika ny mividy amin'ny Geekvida aho amin'ny toe-javatra rehetra. Mahamenatra ny fitondran'izy ireo ny mpanjifa sy ny serivisy aorian'ny varotra, tsy azoko notaterina izy ireo satria nanaiky ny fe-potoana nomeny aho rehefa nividy. Manoro hevitra anao aho mba hikaroka kely amin'ny Internet alohan'ny hanaovana fifanakalozana amin'izy ireo.
Valiny tamin'i Jorge Marín Nieto
Ashley dia hoy izy:
Raha izaho manokana dia tsara ny traikefako miantsena any Geekvida. Fandefasana haingana sy fiantohana 2 taona any Espana, heveriko fa tena tsara.
Valiny tamin'i Ashley
Selfie maro nalaina tamin'ny fakantsary anoloana an'ny HTC 10 no voasivana
Nevolution, vaovao avy amin'ny mpamorona ny Greenify, mamela anao hifehy ny fihetsiky ny fampandrenesana rehetra